Kava wabvisa - J & S Botanics
[Appearance] Yellow upfu
[PARTICIPLE Kukura] 80Mesh
[Net uremu] 25kgs / dhiramu
Kava, aizivikanwawo Piper methysticum, Kava Kava, uye 'awa, iri diki shrub chizvarwa kuzvitsuwa zviri South Pacific. Mudzi madzinde acho kuva asiri chidhakwa, zvinovhiringidza pfungwa chinwiwa kuti rave richishandiswa mumagariro uye asina kwemazana emakore. Hawaii, Fiji, uye Tonga.
Kava kare kugadzirira nokuisa pasi midzi uye kunokonzerwa mugomba porous saga, ruchifukidza mumvura, uye kudzvinya muto mugomba guru, wakavezwa, yemapuranga mbiya. Coconut hafu-goko makapu vari vakanyika uye akazadza - yepanchi Style. Pashure kunwa kapu kana maviri kunzwa kwakawedzera iteerere pamwe kuzvivaraidza rinotanga kuuya pamusoro. Kunyange zvazvo riri kuchizorodza, zviri kusiyana doro kuti pfungwa kuramba yakajeka. The munuhwi kunonyanya kusina basa, asi vamwe vanoona kuti zvinoda ndichipfeka kushandiswa; zvechokwadi zvinobva zvaunofarira kuti ndewevhu siyana.
[Kava ndiye Safe Kushandisa]
The yakachengeteka uye inobudirira kunobatsira Kava kusimbisa zviratidzo mwoyo vakanga akatsigira mune Meta-pachisara humwe hurongwa Statistical uongororwe nemiedzo dzevanhu nomwe zvekuchipatara rakabudiswa muna 2000 muna Journal of Clinical Psychopharmacology, uye zvakare muna yakaoma uongororwe zvakafanana muna 2001. The Wongororo havana kuwana kukosha nemigumisiro chokuita chiropa toxicity.
Mukupedzisira, chiropa zvinovhiringidzika vakawanda zvinhu, kusanganisira mushonga uye vasiri inonyorwa zvinodhaka, uyewo doro, inova kukonzera kukuvara chiropa. Tinofanira kuziva kuti miriwo Mishonga simba, kubatwa yakakodzera kuremekedzwa panyaya zvinogona mukukurukurirana uye toxicity, kusanganisira kuti chiropa. Ukuwo, Kava Kava kwakaita kumucheto yokuchengeteka kure runopfuura kuti zviri mishonga nerokuti.
Kava kunogona kubatsira zvaizopedza zvinoverengeka matambudziko, zvikuru zvikurukuru kunetseka, kufunganya, uye kuvhiringidzwa hope avaiita. Zvisinei, Kava kuti anxiolytic (Anti-mavhunduka kana Anti-kufunganya mumiririri) uye chinozorodza zvivako anogona kuzadzisa zvimwe zvirwere zvakawanda mupfungwa uye kufunganya chokuita.
1. Kava somunhu Yokurapa kuti Kufunganya
2. Kava Dai Worufu kuenda kumwedzi Zvinyamusi
4. Combat Kukurumidza poKukwegura
5. Kurega Kusvuta Aid
6. Combat marwadzo sezvo mushonga unonyaradza marwadzo
7. kushaya hope
Next: Marigold mushoma
Green tii mushoma
Nhanga Seed wabvisa
Ginger Root wabvisa
5-htp Benefits Most 5-htp aizivikanwawo oxitriptan (INN) iri zvikaramba kubva mbeu imwe Woody kukwira shrub chizvarwa ...